Enoka, zanak'Andriamanitra, niara-nandeha tamin'ny Rainy
"Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka; ka tsy hita izy, fa nentin'Andriamanitra" - Gen. 5:24.
Voalaza fa rehefa dimy amby enim-polo taona izy, dia niteraka zazalahy ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny telonjato taona. (...) Taorian'ny nahaterahan'ny zanany voalohany dia nahatratra fanandramana lalina kokoa i Enoka; nifandray akaiky kokoa tamin'Andriamanitra izy. Tsapany tamin'ny fahafenoany kokoa ny adidy aman' andraikiny tamin'ny naha-zanak'An-driamanitra azy. — PP, 84
Nifanohitra niharihary tamin'ny faharatsian' ireo olona niara-niaina taminy ny fiainam-pahamarinan' i Enoka. Vokatry ny fiarahany nandeha tamin'Andriamanitra ny fitiavam-bavaka nananany, ny fahadiovany ary ny fahitsiany tsy niovaova. Vokatry ny fiarahan'izy ireo nandeha tamin' ilay mpamitaka ny taranak'olombelona kosa ny faharatsian'ny mpiara-belona taminy . Tsy nisy hatrizay ary tsy hisy intsony ny vanim-potoana izay nanjakan'ny haizina ara-pitondran-tena toy ny tamin'ny vanin'andro izay niainan'i Enoka fiainam-pahitsiana tsy nisy tomika.
Tao anatin'ny asa mafy izay niainany, dia nijoro tamin'ny firaisany tamin'Andriamanitra i Enoka. Arakaraka ny nahabe sy nahasarotra ny asany no nitozoany sy nikirizany tamin'ny vavaka (...) Rehefa avy niaraka kelikely tamin'ny olona mba hiasa mba hahasoa azy ireo, tamin'ny alalan'ny fampianarana sy ny ohatra izy, dia nisintaka mba hanokana fotoana hitokanana, noana sy nangetaheta ny fahalalana izay Andriamanitra irery no afaka manome izany. [...] Rehefa avy nandia ireny fotoana niraisany tamin'Andriamanitra ireny izy, na ireo tsy nivavaka tamin'Andriamanitra aza dia talanjona nahita ny hazavan'ny lanitra teo amin'ny endriny. — PP, 86,87
Antsoina koa isika hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Amin' izany dia hohazavain'ny taratry ny fanatrehany ny endritsika, ary rehefa hifankahita isika dia hiresaka momba ny heriny, ka hilaza hoe deraina anie Andriamanitra. Andriamanitra no Tompo, ary soa indrindra ny teniny (...) Ary ireo izay hakarina amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany dia ireo izay niaina tao anatin'ny firaisana tamin'Andriamanitra teto an-tany. — SDABC 1:1087